दस्तोयेभ्स्कीको उपन्यास र नेपालको वर्तमान स्थिति « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
निरन्तर मौसम बदली र बर्षा
मुख्यमन्त्री आचार्यले आज विश्वासको मत लिने, कस्तो छ अंकगणित ?
दस्तोयेभ्स्कीको उपन्यास र नेपालको वर्तमान स्थिति
१९ भाद्र २०७७, शुक्रबार ११ : २७ बिहान
म फ्योदोर दस्तोयेभ्स्कीको विश्वप्रसिद्ध उपन्यास पढ्दै थिएँ, कारण अमेरिकाको टेक्सासबाट एकजना दाइले आज अगस्त २९, २०२० लाई मलाई ७ मिनेटको समय दिएर प्यनलिस्ट राख्नुभाको थियो । यो उसबेला मास्कोमा पढ्दैगर्दा पढिसकेको पुस्तक फेरि एक पटक हेरिभ्याएँ ।
यो १८६० को जुलाईको घटनामा आधारित उपन्यास ५०० भन्दा बढी पानाको एउटा उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक विश्लेषणमा आधारित कृति हो । अपराध र दण्ड उपन्यास मानवीय आवश्यकता र तिनको परिपूर्ति र त्यस परिपूर्तिका लागि हुने हिंसा अनि हिंसाको ढाकछोप र त्यसबाट उत्पन्न मानसिक डर, त्रास, अविश्वास र अन्तत्वगत्वा पश्चाताप र समर्पणको अति सुन्दर वर्णन गरिएको एक अमर कृति हो ।
यस पुस्तकको प्रमुख पात्र रोदिओन रस्कोल्निकोभ एउटा २३ वर्षको केटो हो । यस्तै उसकी बहिनी दुनियाँ आमा पुल्खेरिया, १८ वर्षे कञ्चन मन भएकी वेश्या सोनिया उसको जँड्याहा बाउ मार्मेलादोभ र सौतेनी आमा त्यस्तै अनि लुझिन, स्बिद्रिगाइलोव, रजुमिखिन हुन् । यस्तै अर्का अनुभवी मजिस्ट्रेट इन्चार्ज पोर्फिरी पेत्रोभिच कथावस्तुमा अल्योना इभनोभ्ना त छाड्नै नहुने नाम हो र लिजाबेत्ता उनकी बहिनी ।
कथा यसप्रकार छ :
२३ वर्षे लर्दाे जवान केटोलाई पैसो आवश्यक पर्छ र ऊ साहुनी इल्यना इभनोभ्नाकोमा जान्छ र आफ्नो घडी ४ रुबलमा बन्धकी राखिदिन भन्छ । अक्योनाले डेढ रुबलमा राख्न मान्छे । तेही पैसो लिएर ऊ त्यहाँबाट हिँड्छ, रिसले मुर्मुरिँदै । बूढी धितो राखेर पौसो ब्याजमा लाउँथी र स्वाभावैले दानी हुने कुरो थिएन । उसले एस खुसट लोभी बूढीलाई नमारी छाड्दिन भनी मनमा अठोट लियो । अब कथा सुरू भयो ।
घरबाट बन्चरो लुकाएर लान्छ र त्यो बूढीलाई हान्छ । बूढी मर्छे । त्यसैबेला उसकी बहिनी लिजाबेत्ता देखा परेकिली ऊ पनि मारिन्छे । रोदिओनले अल्योना इभानोभ्नाका पैसा र समान सोहोरेर लान्छ । अन्जान झैँ बेफिक्र बस्छ । कैसैलाई थाहा हुँदैन त्यस बूढीलाई कसले मार्याे भनेर । अनि सुरु हुन्छ सारा कथा मानवीय स्वभावावृत्त प्रतिक्रियात्मक कलाकौशल र जीजिविशाको ।
उता जँड्याहा मार्मेलादोभ मर्छ । सद्गद गर्ने पैसो रस्कोल्निकोभले दिन्छ, त्यो केटो महत्त्वाकाङ्क्षी छ तर मनकारी पनि देखिन्छ ।
मर्नुभन्दा अलि अघि नै एकपल्ट उसले एउटा धनी मान्छेलाई भनेको थियो, ‘गरिब हुनु पाप हैनरछ हजुर, तर दरिद्री हुनु त अपराध हो ।’
स्कोल्निकोभले गरेको हत्याको जिम्मेवारी एउटा अर्कै मान्छेले लियो । रस्कोल्निकोभ छक्क पर्याे तर वेश्या सोनियाको मायामा परेको त्यो युवकले एकान्तमा हत्या आफूले नै गरेको स्वीकार गर्यो ।
दस्तोयेभ्स्कीको चतु¥याइँले त्यो गोप्य स्वीकारोक्ति सुन्ने स्वेर्दिगाइलोभलाई त्यहाँ प्रगट गरिदियो जसले रस्कोल्निकोभकी बहिनी दुनियाँलाई यौन तृप्ति दिन ब्ल्यालकमेल गरेको देखिन्छ । दुनियाँको सशक्त प्रतिकारले महिलाले अस्मिताको स्वयंले रक्षा गर्न सक्छन् भन्ने दृष्टान्त दिएको देखिन्छ ।
युवक हठात पुलिस कहाँ पुग्छ र अपराध कबोल गर्छ । कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर उसलाई ८ वर्षको कठोर श्रमको साइबेरियाको निर्वासनमा पठाइन्छ । ऊ खुशीसाथ यो दण्ड कबोल गरेर साइबेरियामा पूरा ८ वर्ष बिताउँछ । बीचबीचमा सोनिया भेट्न जान्छे । उनीहरूबीच प्रेम झाँगिएको पत्तै हुँदैन । रस्कोल्निकोभ परिवर्तित भइसकेको हुन्छ ।
पछि उनीहरूको बिहे हुन्छ । अब अहिलेको परिस्थिति हेरौँ । अहिले नेपालको स्थिति हेर्दा नेताहरू र सरकार सबै अल्योना इभनोभ्ना भन्दा गएगुज्रेका छन् । ऊ त कमसेकम ब्याजमा पैसो लगानी लाउँथी, पैसो खनखाँचो टारिदिन्थी तर नेता र सरकारका मान्छेहरू त मुलुकको पौसो बोरामा ट्यङ्कीमा लुकाउँछन् कि त विदेशमा लुकाउँछन् ।
देशको भविष्य अन्धकारमय देखिँदैछ । सीमित आततायीहरू पैसको लुट गर्दैछन् । मान्छे खान नपाएर हजारौँ हजार सडकमा छन् । सडकमा निषेधाज्ञा जारी छ । मान्छे डिप्रेसनले मरिराखेकछन् । लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू नेपाल फर्किसकेका छन् ।
अब रस्कोल्निकोभ जस्ता लाखौँ बेरोजगार युवाहरूले यहाँ के गर्लान् आफैँ बुझ्नुस् पाठकहरू ।
महान् आत्मा फ्योदर दस्तोयेभ्स्कीप्रति श्रद्धाञ्जली ! उनको जँड्याहा मार्मेलादोभकी छोरी पवित्र सोनियाप्रति श्रद्धाञ्जली ! महत्त्वाकाङ्क्षी रस्कोल्निकोभ र नारी विद्रोहकी प्रतिमूर्ति दुनियाँप्रति पनि श्रद्धाञ्जली !
‘क्रान्तिमा होमिएको योद्धाको दसैँ : मनमा कि वनमा ’
मन्दिर वरिपरि मागेर खानेहरुतिर सरकारको गएन् ध्यान, उनीहरुलाई चाहि दशैं नआएको हो र ?
बैंक फाइनान्सको मौलाउँदो ठगी धन्दा, अर्थ र सहकारी मन्त्रालय मौन